Ayikwazi ukulanda lutho
Umbuzo Ayikwazi ukulanda lutho
iminyaka 2 4 Sekwedlule amaviki #488 by Penzoil3
Bhalisiwe, konke ukulanda isikhathi. Mahhala downloads- sonke isikhathi ngaphandle. Angikaze ngiye bakwazi ukulanda lutho izinyanga!
Lena bleeping engenangqondo!
iminyaka 2 4 Sekwedlule amaviki #489 by Dariussssss
Kuyoze une ukuthi inkinga?
iminyaka 2 4 Sekwedlule amaviki #490 by Dariussssss
Ninazo into iskripthi ekuvimbeni efakwe esipheqululini sakho?
Hlola uxhumano lwakho lwe-Inthanethi, kungase kube indlela kancane kakhulu salokhu.
Angikwazi thwebula lutho ngaphandle inkinga, ngakho-ke ngicabanga inkinga ngohlangothi lwakho.
Zama ukusinika ulwazi oluthe xaxa.
iminyaka 2 4 Sekwedlule amaviki #491 by Penzoil3
Njengoba ngasho ezinyangeni ezimbalwa. Mina attemptede ukuxhumana RIKOOOO ngaphambili, zonke engasithola kwakuyincwadi Gee amaseva ethu kukhona okuhle. izikhathi Konke phandle phambi ngithole thwebula, khulula noma ilungu okulandwayo kokubili.
iminyaka 2 4 Sekwedlule amaviki - iminyaka 2 4 Sekwedlule amaviki #492 by rikoooo
Ngo-FAQ yethu siye wachaza ukuthi ukulandwa yethu kunikezwa 8080 port esikhundleni port 80. Ngakho, indlela simpliest ukwazi ukuthi port yakho 8080 ivinjelwe firewall yakho ukuzama ukulanda okuthile kusuka Simviation.com, kungani? Ngenxa simviation sebenzisa port efanayo zokulanda yabo, ngakho uma asisebenzi simviation futhi Rikoooo ke kungcono 100% ukuthi, firewall yakho ukuvimba 8080 port. Kumelwe uvule imbobo 8080 TCP / UDP ngokungeza umthetho ku-firewall yakho.
Khona-ke konke ukulanda izosebenza kwi website yethu ngisho kwamanye amawebhusayithi amaningi.
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 amaviki angu-4 edlule rikoooo.
unyaka 1 9 edlule #700 by Penzoil3
Uma ngabe omunye umuntu owake wabika le nkinga, batshele ukusetha kabusha izilungiselelo zabo ze-firewall ezizenzakalelayo. Inkinga yami yayizimele.